Ngokuvamile eRussia-Umama wasakaza amaphiko akhe kusukela entshonalanga kuya empumalanga. Ukusuka kolwandle olumile lwaseBaltic kuya ezinqabeni ezisenyakatho, ezivela emanzini aqhamuka e-Arctic Ocean. Izwe elikhulu kunawo wonke, endaweni eyi-11.5% yendawo yonke yomhlaba, ayidumile kuphela ngenxa yezindleko zayo ezingapheli, kodwa nezinhlanzi ezingapheli, imifula emifula, i-taiga eqinile nehlathi elisehlathini. Indlela esuka komunye umkhawulo wezwe ukuya kwesinye ithatha ingxenye eyodwa nengxenye ukuya emavikini amabili, futhi ngezinye izikhathi zonke ezintathu, uma uhamba entwasahlobo noma ukuwa, uma ingxenye yomgwaqo ibonakala, futhi ingxenye iqhutshwe ukuze ijubane lokunyakaza liwele ngesivinini isinyathelo somuntu. Futhi uma usengakwazi ukufika emazweni amancane wezwe, uhamba ngomgwaqo omkhulu ukusuka komunye umuzi ukuya kwenye, khona-ke izindawo ezimbili ezincane ebalazweni lezwe lethu elikhulu zivame ukuhlanganyela amabanga amakhulu kakhulu kunokuhamba okuvamile emgqeni oqondile.
Ibanga "Saratov - Kazan"
Ungenzi okwehlukile kanye namadolobha amabili amakhulu futhi adumile. Imizila yezokuxhumana yaseFrance emkhatsini wayo ayilwanga, naphezu kokubaluleka kwabantu bendawo. Kwabashayeli bamandla, ukukhethwa yizindawo ezihamba ngezindlela zemigwaqo kuphela, ngezinye izikhathi ezincane futhi ezinomgwaqo, ngezinye izikhathi akuzona nezekhwalithi ephezulu, okunciphisa kakhulu izinga lokuphepha uma uhamba kuzo. Ibanga elithi "Saratov-Kazan" ngokuqondile liyi-515km. Kodwa-ke, umhambi wezimoto ekupheleni kohambo ulindele ukumangala okungajabulisi ngesimo sezinombolo ezihluke ngokuphelele kuboniswe ku-odometer.
I-Kazan, inhloko-dolobha yaseRiphabhlikhi yaseTatarstan, ivame ukubizwa ngokuthi yinhloko-dolobha yesithathu yeRussia Federation ngemva kweMoscow neSt. Petersburg. Futhi akuyona ize. Idolobha lihle kakhulu, ikakhulukazi ebusuku. Zonke zikhanyiswa izibani, i- Kazan Kremlin ibheka abahambayo kusukela ekuphakameni kwegquma ngombono oqinile futhi obandayo. Kukhona ngisho negatsha lomshuwalense edolobheni, iziteshi zazo ezizimele ngezinye izilimi ngezilimi ezintathu: isiTatar, isiRussia nesiNgisi.
Ibanga eliphakathi kwamadolobha aseSaratov naseKazan esitimeleni lilula kalula futhi kalula. Kubonakala sengathi lo mdwebo usanda kuphuma esikhungweni somsindo senhloko-dolobha yaseRiphabliki, ewela iVolga, futhi emva kwamasonto ambalwa usuhamba ngesigodi esiteshini sesitimela saseSaratov, isiteshi "Saratov-1" Umgibeli. Isikhathi sokuhamba singamahora angaphezu kweshumi nanhlanu. Ukuhamba okuyizinkulungwane ezingu-1720 ze-ruble zesihlalo okugcinwe kanye nama-ruble angu-2460 endaweni. Ibanga elithi "Saratov-Kazan", elihamba nalo mhambi, elilandela idolobha ngokuya ngesitimela, seluvele seliyi-701 km, okungukuthi, amakhilomitha angu-185 ngaphezulu kunomugqa oqondile.
Kodwa kunezindlela ezimbili zokufika lapho ngezimoto zangasese ukusuka komunye umuzi ukuya kwenye. Umzila omfushane ugijima ku-P228 no-P221. Umzila udlula emidolobheni emikhulu njengo-Ulyanovsk, eSyran naseBalakovo, ukulala, ngaphandle kokunye, eceleni komfula iVolga. Uma uthatha lo mzila, ibanga eliphakathi kukaSaratov neKazan ngale ndlela lizoba amakhilomitha angu-675. Emaphethelweni eSaratov, umgwaqo umgwaqo omkhulu ongu-6 (ukuhamba ngezinyawo ezintathu) endaweni enhle ye-asphalt, uphawu olucacile nesiqhingi sezokuphepha semitha nesigamu, ngaphandle kokuhlukaniswa komgwaqo. Kodwa-ke, cishe ngokushesha ngemuva kokuhamba kwesiteshi se-auto "Kamaz", ikhwalithi yendlela yomgwaqo iyancipha futhi inani lamigwaqo liyancipha libe linye kunhlangothi ngayinye. Indlela yokuhamba emigwaqweni emibili iya e-Syzran, ebeka ngezikhathi ezithile amakhukhutezi ayingozi ngemigoqo yomgwaqo, abakwa-catchers, futhi kuphela eduze komuzi ikhwalithi yomgwaqo iyakhula kancane. I-Samu Syzran ngokwayo ingadlulela emgwaqeni omkhulu we-M5, futhi, ngemva kokuba u-A251 wesifunda, uthathe inkambo e-Ulyanovsk. Ikhwalithi ye-asphalt lapha futhi i-limps, emgqeni ohlangothini ngalunye, ngokuqhathanisa kuyingozi ukuphuma. Ngemuva kokuhamba phakathi kwe-Ulyanovsk, sivuselela kabusha emgwaqweni omkhulu wendawo P241. Amathangi nama-potholes lapha angaphansi kakhulu, kwezinye izindawo azikho izimpawu, kepha kuningi labaphathi bezophuthumayo. Ngokuqhubekayo sishiya "fedaralku" M7, siwela kuwo Volga futhi sisondela ekupheleni komzila.
Inombolo yokukhetha 2
Iningi labantu abahamba ngemoto bakhetha ukuthatha enye indlela, elandela umzila "Kazan - Saratov". Ibanga ngemoto eladlula ngale ndlela landa kancane, kepha izinga lomgwaqo liwumyalo wokuphakama okukhulu kunokuba kuhambisane nokuhamba kokuqala. Inketho yesibili idlula emadolobheni amakhulu njengeSaransk, uPenza noRuzaevka. Ukusuka eKazan emgwaqweni omkhulu we- M7, siya ngasentshonalanga, sibheke eMoscow, futhi emva nje komzana waseChirichkasy siphendukela ngakwesobunxele, siye emgwaqeni omkhulu wesifunda onesiqondiso ku-Kanash. Umgwaqo omkhulu, ngisho ngaphandle kokumaka, kodwa cishe ushiyiwe. Ukuphela komgwaqo kuphela komgwaqo ugcwele umgwaqo. Ngokuqhubekayo umzila uhamba cishe kufana nesitimela kuze kufike eSaransk, lapho usuvele ungena emgwaqweni omkhulu wendawo P178. Siyahamba edolobheni ngeP180 futhi ngemuva kwesifunda sisuka ngokushelela ku-Р158, esithatha ikamu ngqo kuSaratov, sidlula iPenza nezinye izindawo ezingabalulekile. Ibanga elithi "Saratov-Kazan" ngokusho kwe-odometer kuleli cala lizoba ngamakhilomitha angu-750. Ngamakhilomitha angu-75 ngaphezulu kokunguqulo yokuqala, namakhilomitha angu-235 ngaphezulu kokuhamba ngendlela eqondile. Nasi i-arithmetic enjalo!
Ungathola kanjani ukusuka eMadrid kuya e-Barcelona? Ibanga ukusuka Barcelona kuya Madrid
Uzoya kuphi eSt. Petersburg kuya ezokuvakasha kusihlwa?
Umgogodla we-Cave - uhlobo olungathandwanga
Indlela flash-Android? Amathiphu Wabasaqalayo
Ukwahlukaniswa kwamadamu uwoyela ukudluliswa ngu Sae ne-API
Ama-pies anjalo e-Ossetian ahlukile
Amaholide nezingane - Yevpatoriya balindelwe!
Lisho ukuthini "Lynch"? Lokhu extrajudicial